Opening of the MMT-ART clinic in Tigyaing in collaboration with the Ministry of Health and Sport – AHRN-Myanmar
Opening of the MMT-ART clinic in Tigyaing in collaboration with the Ministry of Health and Sport
By AHRN IT — In Activities, slider	— 26/08/2020
ထီးချိုင့်မြို့နယ်​ဆေးရုံတွင် MMT-ART ​ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် AHRN Myanmar တို့ ပူး​ပေါင်းပြီး ထီးချိုင့်မြို့နယ်​ဆေးရုံတွင် MMT-ART ​ဆေးခန်းဖွင့်ပွဲအခန်း အနား ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်​နေ့မနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ထီးချိုင့်မြို့နယ်​ဆေးရုံ အစည်းအ​ဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
MMT-ART ဆေးခန်းကို ထီးချိုင့်မြို့နယ်​ဆေးရုံတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ လိင်ဆက်ဆံဖော်များ၊ လိင်လုပ်သားများ၊ လူငယ်များနှင့် ပြည်သူလူထုများကို HIVပိုး​သွေးစစ်​ပေးခြင်းနှင့် ART ​ဆေး​ပေးခြင်းအပါအဝင်၊ မက်သာဒုန်းတိုက်​ကျွေးခြင်း ၊မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သော အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးနှင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို စတင် ဆောင်ရွက်​ပေးပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားကို မနက် ၉ နာရီခွဲတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ထီးချိုင့်မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ​​ဒေါက်တာ ကိုကိုနိုင်မှ အဖွင့်အမှာစကား​ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ထို့​နောက် အတိုင်ပင်ခံစိတ်ကျန်းမာ​​ရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ​ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်ဖြိုး(မုံရွာ ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး)မှ ​မူးယစ်​ဆေးစွဲခြင်း သည် ကျန်းမာ​ရေးပြသနာဖြစ်​ကြောင်း ပြည်သူလူထုအားလုံးမှ ပူး​ပေါင်းပါဝင်မှ မက်သာဒုန်းတိုက်​ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်း​အောင်မြင်မည်ဖြစ်​ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအ​နေဖြင့် အပြစ်​ပေးမည့်အစားကူညီ​စေလို​ကြောင်း ရှင်းလင်း​ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဌာနဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ (ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဦးစီးဌာန၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး စသည့်) နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သော အန္တရာယ်များ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများနှင့် အန္တရာယ်လျော့ပါး ရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုများကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများစသည် တို့ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ​နေ့လည် ၁၁ နာရီခွဲတွင်အခမ်း အနားပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ယခုအချိန်အခါတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် တစ်ကမ္ဘာဝှမ်းလုံး တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အာရုံစိုက်မှုအများအပြားရလျက်ရှိသော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏လိင်ဆက်ဆံဖော်များ၊ လိင်လုပ် သားများနှင့် လူငယ်များကြားတွင် HIV ရောဂါ၊ TB ရောဂါ၊ ဆေးလွန်ခြင်း စသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုလည်းတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရန် အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။ ထို့​ကြောင့် AHRN- Myanmar နှင့် ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူး​ပေါင်းပြီး မက်သာဒုန်းတိုက်​ကျွေးခြင်းနှင့်ART ​ဆေး​ပေးခြင်းတို့ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်​​ဆောင်​ပေးနိုင်​သော​ဆေးခန်းကို ထီးချိုင့်မြို့နယ်​ဆေးရုံတွင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံ​သောအန္တရာယ်​လျှော့ပါး​ရေးလုပ်ငန်းများကို ထီးချိုင့်တစ်မြို့နယ်လုံးတွင် AHRN မှ ကျန်းမာ​ရေးဝန်ထမ်းများမှ လုပ်​ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထီးချိုငိ့မြို့နယ် အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ အတွက် AHRN အင်း​တော်စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများစု​ပေါင်း​၍ငွေတစ်သိန်းကိုလည်းဂုဏ်ယူဝမ်း​မြောက်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
AHRN အနေဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသော #UHF #CPI နှင့် #UNAIDS အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Latest News! Opening of the MMT-ART clinic in Tigyaing in collaboration with the Ministry of Health and Sport
AHRN-Myanmar held the opening ceremony of the MMT-ART clinic in Tigyaing in the meeting room of Tigyaing Township Hospital on 21.8.20. We are proud to report that we will offeracomprehensive package of harm reduction and primary health care to the drug users and their sexual partners, sex workers, youth, and community.
The opening ceremony speech was held by Dr. Ko Ko Naing (Township Medical Officer, Tigyaing), after which Dr. Pyait Pyait Phyo( Senior Consultant, Psychiatrists, Monywa General Hospital) explained that drug dependency isahealth problem and urged that all the community support the methadone program to make thisasuccess, will ask the community to support people who struggle with drug use and not punish them.
Local officials and the local communities attended the ceremony and discussed the harms related to drug use and the concept of harm reduction. Now, the COVID-19 pandemic is affecting the world, participants were interested to learn about this. While at the same time also in Tigyaing many people are impacted by HIV, TB, and there and overdose cases among the drug users and their partner, sex workers, and youth.
To confront the drugs and health consequences, in collaboration with the Ministry of Health and Sport, AHRN-Myanmar has opened the MMT-ART one-stop-shop clinic at the Tigyaing Township hospital, where AHRN health staffs will provideacomprehensive package of harm reduction to the Tigyaing Township. AHRN Indaw project staff has proudly donated 1 lakh to support the Tigyaing General Hospital.
We are grateful for the kind monetary support of #UHF #CPI and #UNAIDS